DJI ga - ekwe ka drones ya fee n’enweghị ịntanetị | Akụrụngwa n'efu
Otu n’ime nnukwu nsogbu ị na-enwe DJI Na drones ha ọ bụ kpọmkwem na, izipu akara site n'aka onye njikwa na ngwaọrụ n'onwe ya iji duzie ya ebe anyị chọrọ, ọ dị mkpa iji akara data rụọ ọrụ, na-abụkarị njikọ WiFi na, n'ihi ụlọ ya na ụzọ ọrụ ya, nwere ike hacked. N'aka nke ọzọ, ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ ngwa DJI ga-ejikọrịrị na ịntanetị mgbe niile, ihe ọzọ na-akpata nsogbu.
N'ime otu akụkọ mgbasa ozi kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China wepụtara, o doro anya na ha enweela otu ndị injinia ha họpụtara taa ma na-arụ ọrụ na mmepe nke nusoro nkwukọrịta ọhụrụ n'etiti njikwa na drone nke ahụ na-enye ohere ka ndị a rụọ ọrụ nke ọma n’enweghị mkpa izipu data n’elu netwọkụ, nke n’aka nke ya ga-eme ngwa njikwa ụgbọ elu ngwa ngwa ma baa uru karịa.
DJI na-arụ ọrụ ugbu a na usoro nkwukọrịta ọhụrụ na-enweghị mkpa njikọ internetntanetị
O doro anya, echiche ha na-arụ ọrụ na DJI lekwasịrị anya n'ịnye ndị na-anya ụgbọelu ọtụtụ nzuzo na nchekwa na nkwukọrịta. Agbanyeghị, ọ ka ga-ahụ etu ihe niile a ga-esi rụọ ọrụ dị ka ọtụtụ ngwa DJI ga-ejikwa ịntanetị, dịka ọmụmaatụ iji nweta map mpaghara, mpaghara anaghị efe na data ndị ọzọ nwere ike ịkwado ụgbọ elu nchekwa maka onye ọ bụla. tinyere.
Dị ka ị maara n'ezie, izu ole na ole gara aga, ihe dị nnọọ yiri ka a mara ọkwa site na DJI, ọ bụ ezie na nkwa a nke mmalite nke ngwanrọ gị ọ na-aga n'ihu. Kpọmkwem, ihe anyị nwere taa bụ usoro nloghachi ọzọ ebe ngwa anaghị ezipụ ma ọ bụ nata ụdị ozi ọ bụla na .ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » DJI ga - ekwe ka drones ya fee n’enweghị ịntanetị
Ihe onyinye DJI Phantom usoro adịghị mkpa ijikọ na tontanetị iji fee. A na-etinye ngwaọrụ ahụ na ọnọdụ ụgbọelu wee fee n'enweghị nsogbu. Enyela ozi ugha ...
Zaghachi Delio Alanis
DJI Phantom usoro drones adịghị mkpa ijikọ na tontanetị iji fee. A na-etinye ngwaọrụ ahụ na ọnọdụ ụgbọelu wee fee n'enweghị nsogbu. Enyela ozi ugha ...
Understoodghọtaghị ihe ntinye okwu banyere.
"DJI ga-ekwe ka drones ha fee na-enweghị ịntanetị" Ihe edeturu nwere ike ịbụ eziokwu mana aha ya dị njọ ... ị nwere ike ịfe mgbe niile na-enweghị ịntanetị.
Zaghachi Marcelo Ferreyra
Carlos peeji nke dijo
Pịabait nwere isi akụkọ na-akpọ okporo ụzọ .. kedu ihe mediocrity, maọbụ na ọ gaghị enwe ihe ijiji na mkparịta ụka
Zaghachi carlos p